उत्कृष्ट करदाताबाट किन बाहिरिए एनसेल र नेपाल टेलिकम ? « GDP Nepal
उत्कृष्ट करदाताबाट किन बाहिरिए एनसेल र नेपाल टेलिकम ?
Published On : 19 November, 2018 12:35 pm
काठमाडौं । सरकारले हरेक वर्ष कर दिवसका दिन सबैभन्दा बढी आयकर बुझाउने कम्पनीहरुलाई सम्मान गर्दै आएको छ । सातौं राष्ट्रिय कर दिवससम्म आइपुग्दा सँधै पहिलो नम्बरमा हुने दूरसञ्चार क्षेत्र यस वर्ष भने सम्मानविहीन भयो ।
सुरुवाती वर्षमा नेपाल टेलिकम र पछिल्ला २ वर्षमा एनसेल सबैभन्दा बढी आयकर बुझाउने कम्पनीका रुपमा सम्मानीत भए पनि यस वर्ष भने उक्त सम्मान सूर्य नेपाल प्रालिले पायो ।
सेवामूलक क्षेत्रबाट उत्पादनमूलक उद्योगले सम्मान पाउनु अर्थतन्त्रको सैद्धान्तिक दृष्टिले राम्रै पाए पनि सूर्य नेपाल मूलतः चुरोट उत्पादक कम्पनी भएकाले जनस्वास्थ्यका दृष्टिले यो कम्पनी अग्रस्थानमा आउनुलाई राम्रो मान्न सकिँदैन ।
दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीहरुको आम्दानी पछिल्लो समय सुस्त दरमा बढिरहेको छ । प्रविधिको विकाससँगै दूरसञ्चारका प्रडक्टहरु उपभोक्तामूखी नहुँदा कम्पनीको व्यापार अपेक्षित रुपमा बढ्न सकेको छैन ।
इन्टरनेटका माध्यमले भाइबर, मेसेन्जर, ह्वाट्सएप, वीच्याट, इमोलगायतबाट वैकल्पिक सञ्चार सम्पर्कका सुविधा प्राप्त भएका कारण टेलिफोन कल घटेको छ । हुन त इन्टरनेट सेवा एनटीसी र एनसेलले पनि प्रदान गर्दछन् तर निजी आईएसपीको तुलनामा अत्यधिक महँगो हुनाले उपभोक्ताले त्यति रुचाउँदैनन् ।
यसरी दुवै टेलिकम कम्पनीको आम्दानी बढ्न नक्दा करदाता सम्मानबाटसमेत उनीहरु चुक्नु परेको छ । साथै, नेपालीहरुको अत्यधिक धुमपान सेवनको प्रवृत्तिका कारण सूर्य नेपालले यो सम्मान पाउनुलाई पनि स्वाभाविक मान्न हुँदैन ।
तर, नर्यात उद्योगतर्फ सबैभन्दा धेरै कर तिर्ने कम्पनीमा डाबर नेपाल, उद्योगतर्फ हिमाल पावर कम्पनी, कषि तथा व्यापारमा प्रो बायोटेक प्रालि, व्यापारमा सिप्रदी ट्रेडिङ, लघुवित्तमा छिमेक लघुवित्त, बैंक तथा वित्तीय संस्थामा नबिल बैंक, बिमामा नेपाल पुनर्बिमा कम्पनी, स्वास्थ्य तथा शिक्षामा नोबेल मेडिकल कलेज, सूचना प्रविधिमा एफवान् सफ्ट, पर्यटन व्यवसायमा तारागाउँ रिजेन्सी, मध्यमस्तरीय करदातामा नेपाल इन्भेष्टमेन्ट कम्पनी, ८० करोड रुपैयाँको कारोबारमा नेपाल स्टक एक्सचेन्जलगायतको सम्मानलाई भने स्वाभाविक रुपमा लिइएको छ ।